YeeCall-အခမဲ့ Video ခေါ်ရန် & Chat APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » YeeCall-အခမဲ့ Video ခေါ်ရန် & Chat ကို
YeeCall-အခမဲ့ Video ခေါ်ရန် & APK ကို Chat
YeeCall ယခုသင်အံ့သြဖွယ်အလှအပဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုဆောင်တတ်၏, တောင်းဆိုနေချိန်တွင်တစ်ချက်ထိတွေ့ရုံ, သင့်ကိုအကောင်းဆုံးကြည့်သင့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြသပါလိမ့်မည်!
YeeCall-အခမဲ့ Video ခေါ်ဆိုမှုအားဖြင့်သင်တို့ကိုအခမဲ့, အရည်အသွေးမြင့်ကဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှု, အသံဖုန်းခေါ်နှင့်အလွယ်တကူသင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုနှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့စာသားမက်ဆေ့ခ်ျပေးပို့နိုင်ပါ။ သင်တို့သည်လည်းလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည့်မဆိုကိရိယာပေါ်, တစ်ကြိမ်ကလူ 20 မှတက်နှင့်အတူရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ကြည်လင်ပြတ်သားစွာညီလာခံဖုန်းခေါ်နိုင်ပါတယ်။ အခုစမ်းကြည့်ပါ!
-Free ဗီဒီယို Call-
1 ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုကို× 1 အလွယ်တကူဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုတစ်ဦးချက်တင်ကနေပြောင်းရွှေ့ဖို့တောင်းဆို One-touch နဲ့ပေါင်းစည်း။ သင်တို့သည်လည်း 20 လူတွေမှတက်သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုနှင့်အတူအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အားလုံးအခမဲ့ပါ။ နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်ကြိုက်သလောက်အဘို့အညာဘက်ကိုလာမယ့်တံခါးကိုမိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုမှဒါမှမဟုတ်ကမ္ဘာကြီးအနှံ့ပြောဆိုပါ။
-Beauty ဗီဒီယို Call-
"Retouch filter ကို" ချက်ချင်းသင့်ရဲ့အသားအရေကိုထုတ်ချောမွေ့, သင်၏အရေးအကြောင်းတွေ / ပေါက် / မစုံလင်မှုကိုဖုံးကွယ်နိုင်ပါတယ်။
"မျက်နှာ Slim" တောင်းဆိုနေချိန်မှာသင်ကပါးလျကိုကြည့်စေသည်။
-Free HD ကို Voice ကို Call-
အဆင့်မြင့်ဆူညံသံဖယ်ရှားခြင်းနည်းပညာကိုသင်မသက်ဆိုင်သည့်ဆူညံပတ်ဝန်းကျင်၏တွေ့ကြုံဖူးဘူးမြင့်အရည်အသွေးစကားသံကိုဆောင်တတ်၏။ ဒါဟာအလိုအလျှောက်ကို detect နှင့်လျော့နည်းသည်အခြားဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှု & ချက်တင် apps များကဲ့သို့တူညီသော connection ပေါ်တွင်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကျဆင်းသွားဆိုလိုတာကကွန်နက်ရှင်မြန်နှုန်းများအတွက်ညှိနိုင်ပါတယ်။ ကျောက်သလင်း-ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအသံပဲ့တင်သံဖျက်သိမ်းခြင်း။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စပြည်တွင်းဖုန်းခေါ်ဆိုမှုသို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာဖုန်းခေါ်ဆိုမှု, သင် YeeCall အတွက်အများဆုံးကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့အရည်အသွေးကိုပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ်။
-Free ညီလာခံခေါ်ရန်, စာသား & Group မှ Chat-
YeeCall ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ချောချောမွေ့မွေ့စကားသံကိုအရည်အသွေးကိုပေးစွမ်းသည်။ သငျသညျတစ်ချိန်တည်းမှာအထိ 20 လူတို့နှင့်အတူစကားပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ setup ကိုညီလာခံခေါ်ဆိုရန်သင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အဆင့်မြင့်ဆူညံသံဖယ်ရှားခြင်းနည်းပညာကိုသင်တို့ရှိသမျှအခန်းတခန်းထဲမှာတွေ့ဆုံတူသောခံစားရစေသည်။ အပြင်အားလုံးအဖွဲ့ဝင်များကိုအလွယ်တကူသတင်းအချက်အလက်တွေကိုတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်မှတစ်ဦးချင်းစီကတခြားတွေနဲ့စာသားမက်ဆေ့ခ်ျ, ဓါတ်ပုံများ, ကောက်ကြောင်းသရုပ်ပုံဖော်ခြင်းနှင့်ရုပ်ပြောင် share နိုင်ပါတယ်,
Minecraft, အရမ်းရယ်ရတယ်, AVA, GTA, CS, CF, DotA, ဂိမ်းကစားသမားအကောင်းဆုံးချစ်မြတ်နိုးတဲ့များအတွက်ဂိမ်းလက်ထောက်။
-Realtime Doodle အခမဲ့ဖုန်းခေါ်နေစဉ် -
-Realtime ဓာတ်ပုံ Sharing-
-Realtime တည်နေရာ Sharing-
YeeCall နှင့်အတူ, သင်သည်မည်သည့်ပိုပြီးဆုံးရှုံးခဲ့ရရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ! YeeCall တိကျစွာအုပ်စုတစ်စုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးရဲ့တည်နေရာများကိုနေရာချထားနှင့်ဖုန်းခေါ်မှတဆင့်ချက်ချင်းမြေပုံပေါ်တွင်သူတို့အားမျှဝေနိုင်ပါသည်။ သင်တို့ရှိသမျှကိုအလွယ်တကူအချင်းချင်းရှာဖွေနိုင်သည်။ သငျသညျတခုကျွမ်းတဝင်မရှိသောမွို့၌အများအပြားသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူခရီးသွားတဲ့အခါမှာဒါဟာအလွန်အသုံးဝင်သည်။
-Address စာအုပ်, Facebook, WeChat & Whatsapp ပေါင်းစည်းရေး -
အလွယ်တကူသင့်ရဲ့ Address Book ဖြင့်ချိတ်ဆက် YeeCall မှသင်၏အဆွေခင်ပွန်းအပေါင်းတို့ဖိတ်ခေါ်, နှင့် Facebook အကောင့်။ သငျသညျ facebook messenger ကို, WhatsApp လိုင်း & WeChat တွင်မိတ်ဆွေများအဘို့အုပ်စုတစ်စုဖိတ်ကြားချက်ကိုမျှဝေနိုင်ပါသည်။
-No နောက်ထပ် Fees-
YeeCall သင်သည်မည်သည့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြေးမပါဘဲမိတ်ဆွေများနှင့်ပြည်ပမှာမိသားစုနှင့်အတူဆက်သွယ်နိုင်သည်ကိုဆိုလိုသည်ကြောင်း, အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင် * မှတဆင့်အခမဲ့ဖုန်းခေါ်ဆို (4G / 3G / EDGE သို့မဟုတ် Wi-Fi ကိုအဖြစ်ရရှိနိုင်ပါ) စေသည်။ သင်တို့သည်နောက်တဖန်တစ်နေ့လုံးပြောနေတာတောင်မှမြင့်မားသောကုန်ကျစရိတ်ကိုစိုးရိမ်လိမ့်မယ်။
အကောင်းဆုံးကိုဆက်သွယ်ရေး app ကိုဖြစ်ခြင်း YeeCall ရဲ့မစ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ပျော်စရာနှင့်အရည်အသွေးမြင့်အသံဖြင့်ခေါ်ဆိုမှုနှင့်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုကိုကဲ့သို့ဆက်သွယ်ရေးစိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်ထိရောက်မှုအုပ်စုတစ်စုဖုန်းခေါ်ခြင်းနှင့် chat ဖို့အသုံးဝင်နည်းလမ်းတွေ, ညီလာခံခေါ်ဆိုခအခမဲ့မက်ဆေ့ခ်ျများ, သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရုပ်ပြောင်များနှင့်စတစ်ကာများ drawing များနှင့်ကောက်ကြောင်းသရုပ်ပုံဖော်ခြင်းအောင်အများကြီးပေး။
လူတွေကိုချိတ်ဆက်နေစဉ်အမြဲသင်သည်ကြောက်မက်ဘွယ်အတွေ့အကြုံတွေကိုယူဆောင်လာ YeeCall ။ သငျသညျကမ်ဘာပျေါတှငျများမှာနေရာတိုင်း, သငျသညျမကျြနှာကိုမှမျက်နှာအဖြစ်ပြောဆိုကြကုန်အံ့ YeeCall ။
* အော်ပရေတာဒေတာစွဲချက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့အနေနဲ့န့်အသတ်ဒေတာအစီအစဉ်သို့မဟုတ် Wi-Fi ချိတ်ဆက်မှုကို အသုံးပြု. အကြံပြုပါသည်။
ကျနော်တို့ကအမြဲသင့်ထံမှစကားကိုနားထောငျဖို့စိတ်လှုပ်ရှားနေပါပြီ! သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းသို့မဟုတ်အကြံပြုချက်ရှိပါက service@yeecall.com ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ
YeeCall ကွန်ယက်လီမိတက်: အားဖြင့်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်
တစ်ဦးက Make ရန်ကဘယ်လို ...
အောက်တိုဘာလ 29, 2017 မှာ 5: 26 ညနေ
ဤသည် App ကိုအလွန်တင့်တယ်သည်။
Wales igini says:
ဒီဇင်ဘာလတွင် 31, 2018 မှာ 10: 01 နံနက်